[I-China World Trade Center CBD] Ukubukeka okuphezulu kwefulethi elinamagumbi okulala angu-2 - I-Airbnb
[I-China World Trade Center CBD] Ukubukeka okuphezulu kwefulethi elinamagumbi okulala angu-2
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Joy
U-Joy Ungumbungazi ovelele
Leli fulethi elingu-140 sqm litholakala maphakathi ne-Beijing CBD, phansi yi-B CBD City Park, enokubukeka okuphakeme kakhulu nokubukwa kobusuku obugqamile.
Leli yigumbi lokulala elikhulu elingu-140 sqm, amagumbi okulala amabili, amagumbi okugezela amabili e-ITC, ikhishi elinakho konke okudingekayo
[Igumbi lokuphumula] Iphansi elikhulu kuya emafasiteleni kasilingi, ukubuka ebusuku kwesibhakabhaka sedolobha le-B CBD. Ihlotshiswe nge-XGIMI flagship projector N20, 100-inch ultra-high description projection, Harman Kardon speakers, jabulela idili elilalelwayo elinendawo yemidlalo yaseshashalazini ekahle kakhulu;
Le bha inomshini wokwenza ikhofi kaFiliphu ophethwe ngokugcwele, usekelwa ngobhontshisi waseGibhithe wekhwalithi ephakeme kakhulu kanye nokudla okulula okukhethwe ngokucophelela ukuze ube nesikhathi sokuphumula ntambama nomndeni nabangane.
[Ikamelo Elihamba Phambili · Suya White] Amafasitela asemaphandleni asuka phansi afike ophahleni abonakalayo endaweni yokuhweba, 2M * 1.8m umbhede ontofontofo; umatilasi wekhwalithi yezinkanyezi.
[Master Bathroom] Ubhavu + ishawa enomshini wokomisa izinwele we-New Zealand, insipho yezandla ye-ecostore yase-New Zealand, uwoyela wamahhashi wase-Japan oyisethi kathathu, ithawula elikhulu lokugeza, ithawula elincane lesandla, ikepisi le-shower, ikhabethe le-shower, kanye nesixubho esithambile esibekelwe okokuzithokozisa kwakho kokugeza okunethezekile.
Ikamelo lezivakashi · Amafasitela amasha namhlophe aphansi kuya kusilingi, 2M * 1.4M + 2M * 1.2M ububanzi nemibhede elala umuntu oyedwa; umatilasi wekhwalithi yezinkanyezi, jabulela ukubukwa kobusuku obuphithizelayo be- CBD ebusuku.
[Igumbi lokugezela lesivakashi] Igumbi leshawa elinomshini wokomisa izinwele we-New Zealand, insipho yezandla ye-ecostore yase-New Zealand, uwoyela wamahhashi wase-Japan oyisethi kathathu, ithawula elikhulu lokugeza, ithawula elincane lesandla, ikepisi le-shower, ikhabethe le-shower, kanye nesixubho esithambile esibekelwe okokuzithokozisa kwakho kokugeza okunethezekile.
Ikhishi elinefriji, uhhavini, izinto zasekhishini, izinto zasetafuleni, newayini
[Igumbi lokuhlanza izingubo] Umshini wokuwasha ozenzakalelayo ngokuphelele, insipho
Le ndlu isendaweni eyinhloko ye-China World Trade Center. Impilo nezokuthutha zilula kakhulu. Kuyinketho enhle kakhulu yokuhamba, imibuthano emincane noma uhambo lwebhizinisi.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nami